By administrator on	 January 17, 2021 स्थानीय खबर
ऐलोपेथिक उपचारबाट हैरान भएका मानिस होमियोपेथिकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । दीर्घ किसिमका रोगले ग्रस्त भएका मानिस होमियोपेथिक उपचारबाट निको भएर सामान्य जीवन बिताइरहेको कुरा सुनेर खुशी लागेको होमियो चिकित्सक डा. आविद हुसेनले बताउनुभयो । उहाँ लामो समयदेखि विराटनगरस्थित ज्योति होमियो क्लिनिकमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ ।
ऐलोपेथिक उपचारबाट निराश भएका मानिस आउने गरेका उहाँले बताउनुभयो । त्यति बेलासम्ममा रोगले मानिसलाई पूर्णरुपमा च्यापिसकेको हुनाले उपचारमा ढिलाइ हुने डा. आविदको भनाइ छ । उपचारबाट सन्तुष्ट हुने मानिसले आफ्ना छरछिमेकमा कुरा गर्दा यसको प्रचारप्रसार बढी हुने गरेको र उपचार गराउन आउने मानिसकै सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको उहाँको अनुभव छ ।
खासगरी, जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी नखाने मानिसलाई यो औषधिले छिट्टै काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । दम, ग्यास्ट्रिक, पित्तथैली तथा मिर्गौलामा हुने पत्थरी, टाउको दुख्ने, शरीरमा मुसो निस्कने, सेतो दाग निस्कने, महिलाको आन्तरिक रोग जस्ता धेरै रोगको उपचार यो पद्दतिबाट हुने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका– २ मा होमियोपेथिक उपचार गरिरहनुभएका डा. नरहरि थपलियाले होमियापेथिकबाट सबै किसिमका पुराना रोगको उपचार हुने जानकारी गराउनुभयो । “म कहाँ खासगरी पुराना रोगमा पेट सम्बन्धिका बिरामी, मानसिक रोग, चर्म रोग भएका आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
होमियोपेथिक उपचार गराउने बिरामीहरुले आफ्नो रोग अनुसार नियमित तीन देखि चार महिनासम्म औषधि खानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । होमियोपेथिक उपचार गराउन बिरामी धनकुटा, तेह्रथुम, झापा र सुनसरीबाट समेत आउने गरेको डा. थपलियाले जानकारी गराउनुभयो । ०००००